फाइजर / बायोटेक - कोविड १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
फाइजर / बायोटेक COVID-१ vacc खोप बायोटेक (एक जर्मन बायोटेक्नोलजी कम्पनी) द्वारा फाइजर (एक अमेरिकी औषधि निगम) को सहयोगमा विकसित गरिएको थियो।
यो पहिलो COVID-१ vacc खोप थियो जो बेलायतको मेडिसिन र हेल्थकेयर उत्पादन नियामक एजेन्सीले अनुमोदित गरेको हो। मानव स्वाधीन आयोग (सीएचएम) को सल्लाहबाट सरकारको स्वतन्त्र विज्ञ वैज्ञानिक सल्लाहकार निकायको सल्लाह लिएर निर्णय भएको हो।
mRNA (भाइरस आनुवंशिक कोडको अंश)
फाइजर / BioNTech खोप लिदा शरीरमा कसरी काम गर्दछ?
ज्याबहरूलाई मेसेन्जर आरएनए (mRNA) भ्याक्सिन भनिन्छ। यसले एमआरएनए भनिने कृत्रिम रूपले उत्पादित आनुवंशिक सामग्री प्रयोग गर्दछ, जसले सार्स-कोभ -२ (COVID-१)) स्पाइक प्रोटीन (भाइरसको अंश जसले यसलाई मानव कोशिकामा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ) उत्पादन गर्न निर्देशनहरू encoded गर्दछ।
इंजेक्शनले शरीरमा यस mRNA सम्मिलित गर्दछ। यसले कोषहरू प्रवेश गर्दछ, जसले आनुवंशिक कोड पढ्छ र भाइरस प्रोटीन उत्पादन गर्न सुरू गर्दछ - जसले प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दछ र भविष्यको संक्रमणको विरूद्ध लड्न कोचिंग गर्दछ।
एमआरएनए अणु सीधा शरीरमा इंजेक्सन हुँदैन, तर लिपिड न्यानो पार्टिकल्सले बनेको तेल बुलबुलेमा बेर्छ, हाम्रो प्राकृतिक इन्जाइमहरू यसलाई भत्काउनबाट रोक्न।
जबले टेबुल डीएनए द्वारा ल्याबमा उत्पादित एमआरएनए प्रयोग गर्दछ, र भाइरसको प्रयोग गर्दैन, परम्परागत खोपहरू जस्तो नभएर भाइरसको कमजोर फार्म प्रयोग गरेर उत्पादन गरिन्छ। यसले दर बनाउन सक्दछ जुन यो उत्पादन गर्न वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ नाटकीय त्वरितमा।
फाइजर / बायोटेक खोपका तत्त्वहरू के हुन्?
यस खोपले ALC-0159 को भागको रूपमा पॉलीथीन ग्लाइकोल / म्याक्रोगोल (PEG) समावेश गर्दछ।
डिसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट डायहाइड्रेट
ALC-0159 =2- [(पॉलीथीन ग्लाइकोल) -2000] -N, N-ditetradecylaystamide
फाइजर / बायोटेक खोप कसरी सञ्चालन हुन्छ?
फाइजर / बायोटेक भ्याक्सिन मात्र सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल वातावरणमा मानिसहरूलाई प्रदान गरिएको छ यदि उनीहरूसँग भएको खण्डमा एलर्जी प्रतिक्रियाहरूको उपचार गर्ने सुविधाको साथ। अरु कसैबाट खोप नलिनू। यदि कसै द्वारा प्रस्ताव गरिएको हो, र तपाईलाई शंका छ भने, तपाईको जीपी संग सम्पर्क राख्नुहोस्
यो खोप तपाईंको माथिल्लो बाहुको मांसपेशीमा ०. m एमएलको एक इन्जेक्शनको रूपमा पातलोपन पछि दिइन्छ।
तपाईंले २ ईन्जेक्शनहरू प्राप्त गर्नुभयो (उही भ्याक्सिनको), कम्तिमा २१ दिनको अन्तरालमा।
COVID-19 रोग बिरूद्ध संरक्षण कम्तिमा दोस्रो खुराक पछि कम्तिमा days दिन सम्म अधिक प्रभावकारी हुन सक्दैन।
के त्यहाँ सम्भावित जोखिमहरू र / वा फाइजर / बायोटेक खोपको साइड इफेक्टहरू छन्?
सबै खोपहरू जस्तै, फाइजर / बायोटेक खोपले साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ, यद्यपि सबैलाई हुँदैन।
प्रायजसो साइड इफेक्टहरू हल्का वा मध्यम छन् र देखा पर्ने केही दिनको भित्र जानुहोस्। यदि साइड इफेक्टहरू जस्तै दुखाइ र / वा ज्वरो समस्याग्रस्त छ भने, तिनीहरू प्यारासिटामोल जस्ता पीडा र ज्वरोको लागि औषधी द्वारा उपचार गर्न सकिन्छ।
मांसपेशी दुख्ने, जोड़ दुख्ने, इन्जेक्शन साइटमा दुखाई
इंजेक्शन साइटमा सूजन
इंजेक्शन साइटमा लालिमापन
दुर्लभ (१००० जनामा १ जनालाई असर गर्न सक्छ)
अस्थायी एकतर्फी अनुहारको झुकाव (बेलको पक्षाघात)
गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रिया (anaphylaxis)
कुनै गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया वा सास फेर्दा समस्या भएको थियो कुनै पनि अन्य खोप इंजेक्शन पछि वा पछि तपाई खोपको पछि।
उच्च ज्वरो संग एक गम्भीर बिरामी। यद्यपि हल्का ज्वरो वा अप्पर वायुमार्गको संक्रमण, चिसो जस्तै खोप लगाउन ढिलाइ गर्ने कारणहरू छैनन्।
कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, जस्तै एचआईभी संक्रमणको कारण, वा तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्ने एक औषधीमा छन्।
एक रक्तस्राव समस्या, सजिलै चोटपटक वा रगत जमाउने रोक्न औषधि प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं सक्रिय पदार्थ वा यस खोपको अन्य कुनै पनि सामग्रीसँग एलर्जी हुनुहुन्छ
एलर्जी प्रतिक्रियाको लक्षणमा छालाको खुजली दाग, सासको दुखाइ र अनुहार वा जिब्रोको सूजन समावेश हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टर वा हेल्थकेयर प्रोफेशनललाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् वा नजिकैको अस्पतालको आपतकालीन कोठामा तुरून्त जानुहोस् यदि तपाईंलाई एलर्जीको प्रतिक्रिया छ भने। यो जीवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।